News | Sex
News | Tag: Sex
एजेन्सी । कतिपय बलिउड तथा हलिउड कलाकारहरु यौनको विषयमा खुलेर कुरा गर्छन् । सेक्सको विषयमा उदार कलाकारहरु जसले १८ वर्ष पुग्नु भन्दा अगाडि नै यौन सम्पर्क गरेको बारेमा हामीले जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं ।
प्रेमले उमेर नपुग्दै आमा बन्न बाध्य हुँदै १३ वर्षीय बालिका
काठमाडौं । सानै उमेरमा प्रेम भयो त्यसपछि सम्बन्ध झन बढी गहिरो बन्न पुग्यो। तर, त्यही प्रेमले गर्दा उमेर नपुग्दै आमा बन्न बाध्य हुँदैछिन स्याङ्गजा कि एक बालिका। केटाले अरुसँग विहे गरादिने डरले बालिकालार्इ आफ्नो बनाउनकै लागि दुबैको सहमतिमै सम्बन्ध भएको देखिन्छ। अल्लारे प्रेमले दुबै जनालाइ अहिले अप्ठेरोमा पारेको छ।
महिनावारीको बेलामा यौन सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ?
एजेन्सी । महिनावारी भएको बेला यौन सम्पर्क गर्न हुन्छ ? या हुँदैन यो प्रश्नले धेरै जोडीहरुले सोध्ने गरेका छन् । यस्तो बेला यौन सम्पर्क गर्ने कुरा इच्छामा भर पर्छ । तर, हाम्रो समाजको चलनचल्तीको कुरा गर्ने हो भने महिनावारीको बेला सम्पर्क गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन ।
'इन्टरनेट यौन'को कुलत, एक छात्राको हत्या
साल्ट लेक सिटी, अमेरिका । अमेरिकाको उटाह विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत एक छात्रालाई गोली हानी हत्या गरेका एक व्यभिचारी व्यक्तिको विगतका निजी विवरणहरुको खुलासाले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । यौन शोषणका लागि महिलालाई ललाइफकाइ जालमा पार्ने ती व्यक्तिले दशौं वर्ष जेलमा बसेपनि त्यस्तै कुकर्म नछाडेको पाइएको छ ।
वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक यौनसम्पर्क गर्न सक्छ ?
एजेन्सी । पछिल्लो समय विश्वमा यौन सम्बन्धी कयौं शीर्षकमा रिसर्च हुन थालेका छन् । सेक्सका मामिलामा जानकार तथा विज्ञहहरुले सर्वसाधरणहरुसँग धारण बुझेर बिभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
बिहे गर्छु भन्दै १६ वर्षीया किशोरीलाई सात दिनसम्म बन्धक बनाएर यौन शोषण
काठमाडौं । डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका २६ वर्षीय लोकबहादुर किकले गाउँकै १६ वर्षीया किशोरीलाई बिहे गर्ने प्रलोभन देखाउँदै सातदिनसम्म बन्धक बनाएर यौन शोषण गरेका छन्।
कस्ता आचरण भएका व्यक्तिहरुले बढी यौनक्रिडा गर्छन्
एजेन्सी–कस्ता आचरण भएका व्यक्तिहरुले बढी सेक्स गर्लान् त ? यो धेरै चासोको विषय हुनसक्छ । समाजमा आचरण खराब भएका व्यक्तिहरु धेरै सेक्स गर्ने धेरैको सोचाइ हुनसक्छ ।
के अनार खाँदा सेक्स पावर बढ्छ ?
एजेन्सी । यदि तपार्इँको पार्टनर सेक्स गर्न इच्छा गर्दैन भने अनार ल्याउनुस त्यसको जुस बनाउनुस र पाटनरलाई खुवाउनुस । दिनको १ गिलासका दरले अनारको जुस १५ दिन सम्म खुवाउनु भयो भने पाटनरको यौन व्यवहार तपाईँले खोजेजस्तै पाउनुहुन्छ ।
हप्तामा २ देखि ३ पटक यौनसम्पर्क गर्दा महिललाई हुन्छ यस्ता फाइदाहरु
यौनसम्पर्कले मानिसलाई केही समयका लागि रमाइलो अनुभुति दिन्छ तर यसको फाइदाहरु त्योभन्दा पनि बढी रहेको छ । यौनसम्पर्कले पुरुष वा महिला दुवैलाई स्वास्थ्य लाभ दिने काम गर्छ ।
यौन सम्बन्धि यस्तो समस्या छ ?
उमेर चढ्दै गइसकेपछि पार्टनरलाई बेडमा सन्तुष्टि प्रदान गर्न अलि कठिन हुने गर्दछ । लिङ्ग उत्तेजना नहुने समस्याले तपाईंको सेक्स लाइफमा नकारात्मक असर पुर्याउँदछ ।